Pisa Pelle hoditra italiana
Ireo vokatra vita amin'ny hoditra Tuscany dia tsy amidin'i Pisa Pelle intsony noho ny fanahiana momba ny tsy fivadihana mpamatsy.
Misoratra anarana ary mahazo fandefasana maimaim-poana
Mandeha ny fanavaozana. Mety ho tsy hita vetivety ny entana vitsivitsy raha manitsy ny vokatra firaketana vitsivitsy izahay.
sokajy rehetra sokajy rehetraAccessorieskitapofehin-kibokitapoclutchcrossbodyraharaha antontan-taratasyFLMpoketralaptopmpitondra hafatra-tsoronyTravelandilanykitapom-batsy
$ $ Iray manontolo
PLN zÅ ‚
Hiantsena ny vokatrao
Namboarina tanana tao Tuscany, Italia
Mividiana kitapo vita amin'ny hoditra italiana amin'ny vidiny lehibe
Miantsena kitapo kitapo
Miantsena kitapo lehilahy
Miantsena kitapo mivezivezy
Miantsena kitapo laptop
Pisa Pelle dia liana amin'ny entana vita tanana sy kanto. Manana ny mpanao asa-tanana mahay indrindra eto Tuscany, Italia izahay. Ny faritra Tuscany any Italia no fo sy fanahy amin'ny famokarana hoditra manerantany eto an-tany miaraka amin'ny tsiambaratelon'ny varotra nolovaina hatramin'ny taranaka maro nifandimby.
Nandalo tamin'ny tantara ny tsiambaratelon'ny fianakaviana
Ny vanim-potoana misy fanjakana marobe mivoaka sy mandroso ary mavitrika any Medieval Italia no tontolo tonga lafatra hipoahan'ny indostrian'ny fanaovana hoditra. Niorina ireo guilds mba hiarovana ireo teknika miafina ampiasaina hamokarana hoditra tsy misy fahita any an-kafa. Ireo teknika ireo dia mbola arovan'ny fianakaviana miafina akaiky, ampitaina hatramin'ny taranaka fara mandimby any amin'ireo faritra namokarana ny takona tsara indrindra eran-tany nandritra ny antsasaky ny arivo taona. Androany i Italia dia mitentina manodidina ny 16% amin'ny famokarana hoditra eran'izao tontolo izao ary mihoatra ny roa ampahatelon'ny hoditra vita any Eropa.
Fitaovana kalitao avo lenta ary fiheverana ny antsipirihany
Ireo dia toetoetra mampiavaka, izay mahatonga ny fahariana ataonay ho tena izy ary solontenan'ny asa tanana Tuscan.
Ny hatsaran'ny vokatra dia ho antsika ny vokatry ny fomba nentim-paharazana sy ny soatoavina ankehitriny.
Ny tanjonay dia ny hahatsapa vokatra iray, izay mahafeno ny filàna maoderina sy ergonomika.
Kitapo laptop laptop
Ny kitapo solosaina dia tsy maintsy ilaina amin'ny fiainantsika andavanandro, satria ankoatra ny PC dia afaka mirakitra antontan-taratasy, diary ary zavatra hafa ilaina amin'ny asa na fianarana. Bu ...
Fotoam-fahavaratra: kitapo mena na kitapom-batsy manga?
Rehefa tonga ny toetrandro mafana ary mihalehibe ny andro, mihala ny loko maizina, mamela toerana ho an'ny feo mamirapiratra sy mavokely, nomena aina mahavelona ...
Ny Distrikan'ny Tanning ao Florence
Ny distrikan'ny hoditra sy kiraro any Tuscany dia zava-misy iraisam-pirenena momba ny lanjany, ny hatsarany amin'ny vita any Italia, izay lasa ...
Momba an'i Pisa Pelle
Pisa Pelle manana finiavana amin'ny tanana vita amin'ny tanana sy zavakanto. Manana ny mpanao asa tanana tsara indrindra any Florence, Tuscany, Italia isika. Florence no fo sy fanahin'ny famokarana hoditra lafo vidy eto an-tany miaraka amin'ny tsiambaratelo varotra nampitambatra nandritra ny taranaka maro.
Misoratra anarana & Tehirizo
Kaody fihenam-bidy fandefasana maimaim-poana amin'ny mailakao.
© Pisa Pelle hoditra italiana